Riwaayadaha riwaayadda ugu fiican
Dib -u -eegista sheekada riwaayadda
Blue Sky, waxaa qoray Daria Bignardi
Muddo ayaa laga joogaa tan iyo markii qalbi jabku ka tagay jaceylka inuu ballan ka qabsado dhakhtarka dhimirka, sida wiil kasta oo deris ah. Ka sheekaynta in qalbi jabka cayriin uu ku qaadanayo waji kale gacmaha Daria Bignardi. Sababtoo ah waxay ku saabsan tahay inay iska furto darxumada ay kaga tagaan kalinimada qabow ka hor inta aan la helin koonkan…
Dayax buuxa, oo uu qoray Aki Shimazaki
Wax ka qorista jacaylku waxay Aki Shimazaki ku leedahay tixgalin gaar ah, hillaac jiritaan jira oo u dhexeeya madhnaanta qalbi-jabka ilaa gu'ga aan dhammayn karin ee jacaylka is-beddelka ah. Biyaha si siman u qulqulaya oo dareen isku mid ah ka soo toosiya meel aan jirin isla marka cabitaanka ugu dambeeya la daadiyo. Ka mid ah …
Shuggie Bain Story waxaa qoray Douglas Stuart
"Geesigu waa qof kasta oo sameeya waxa uu awoodo," Romain Roilland wuxuu ku soo afjaray isagoo tilmaamaya dhammaan xigmadda adduunka. Laakiin waxaa jira wax yar oo aan u maleyneyno in ilmuhu sameyn karo si uu dib ugu helo caruurnimadiisii. Sababtoo ah waayida faracii waa wax aan dabiici ahayn marka la waayo waalid ...
Awoodda eyga, ee Thomas Savage
Taariikhda Thomas Savage dhashay 1967 kii oo hadda inagu soo fool leh fayraskaas yaabka leh ee dhulgariirkii lama filaanka ahaa. Waagii hore waxay u ekaan kartaa taariikhda qoto dheer ee Mareykanka, maanta waxaa dib loo helay sheeko qotodheer oo xoog leh, ugu yaraan bilawga hore, taas oo ku qotonta fikradda waxa ...
Xayawaanka Mengele ee Gert Nygardshaug
Had iyo jeer waa waqti ku habboon in la barto xoogaa xiisaha leh sida "Mengele Zoo", weedh lagu sameeyay Boortaqiiska reer Brazil oo tilmaamaysa fowdada wax kasta, iyada oo si xun loola jeedo dhakhtarka waalan ee dhammaystiray maalmihiisii ​​hawlgabka si sax ah Brazil. Inta u dhaxaysa kaftanka madow iyo mala awaalka aan fiicnayn ee ...
Nasashada Habeenkii, waxaa qoray Marieke Lucas Rijneveld
Waxyaabaha ugu daran ayaa ah kuwa dhaca waqtigooda. Waqti uma fiicna nabadgelyada hore. Iyada oo ay taasi jirto, haddana waxa ugu xun ayaa dhacaya, iyada oo ay jirto caddayntaas oo aan la sharrixi karin sababtuna tahay bini -aadamka in kasta oo la isku dayayo in lagu xidho nooc ka mid ah dhimashada ayaa hordhac u ah abaalmarinta ama ...
Raadadka Aamusnaanta, waxaa qoray John Boyne
Masiirka qoraa kasta waa inuu noqdaa inuu qoro shaqadiisii ​​ugu fiicnayd waxyar kahor intuusan masraxa ka bixin, ha ahaado isagoo ka baxay dunida suugaanta ama geeri. Qallafsan laakiin run ah. Sababtoo ah waxaan helnaa kiisas la mid ah kii John Boyne, oo aan awoodin inuu kor ugu kaco cunugiisa ...
Frankstein hooyadii, ka Almudena Grandes
Had iyo jeer waxaan u arkaa etymology -ga erayga hysteria mid xiiso leh. Sababtoo ah waxay ka timaadaa uurkii Giriigga. Oo sidaas si sahal ah ayey ula socotaa isu -imaatinka fudud iyo karaahiyada ah ee dheddigga leh dabeecadda waalan. Aberrant. Almudena Grandes Sheekadani waxa ay ku qotontaa qof dumar ah oo dhimirka wax ka qaba oo ka jiri jirtay ...